DHIBEE GARAA KAASAA ,KAANSERII’ HARMAA FI WALALOO –NU OOLCHI!–Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsaa – Beekan Guluma Erena
DHIBEE GARAA KAASAA ,KAANSERII’ HARMAA FI WALALOO –NU OOLCHI!–Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsaa	Beekan Erena
HEALTH, Poems June 21, 2016OROMO
DHIBEE GARAA KAASAA
Dhibeen garaa kaasaa yeroo amma biyya keessatti
mul’achaa jiru, kan maqaa jijjiirratee ‘Garaa kaasaa fi
Balaqqamsiisaa ykn Haqqisiisaa Ariifachiisaa!’
jedhamuun jiru, kan inni nama qabu ykn karaan inni
ittiin namatti daddarbu:
1. Bishaan faalame dhuguun,
2. Nyaata faalamaa nyaachuun namatti darba!! Kunis
‘baakteeriyaa’ dhibee kana fiduun yeroo faalaman
1. Garaa kaasaa bishaana’aa (watery diarrhea),
2. Bishaan qaama keessaa baay’ee hir’isuun (severe
dehydration), hanga lubbuu namaa dabarsuu!
4. Ho’ina qaamaa,
5. Mataa dhukkubbii fi
6. Garaa ciniinnaa dha!
*Akkamittiin of irraa ittisna!?
1. Bishaan qulqulluu ykn kan akka gaariitti danfe
2. Harka ofii yero yerootti ‘saamunaa’ fi bishaan
qulqulluudhaan akka gaariitti dhiqachuu!!
3. Mana fincaaniitti haalaan fayyadamuu!
4. Bobbaatii bakkeetti ykn naannoo lagaa, bishaan
dhugaatii namaaf oolutti bobba’uu ykn gatuu dhiisuu!!
5. Nyaata nyaannu haalaan bilcheessuun soorachuu!!
KAANSERII’ HARMAA AKKAMIIN OF-IRRAA ITTISUUN DANDA’AMA!? (Shamarraniif!)
‘Kaanserii’ harmaa of irraa ittisuun nii danda’ama! Kunis mala armaan gadii fayyadamuun dafanii waan harma keessaatti dhiita’u/biqilu bira ga’uun yaalii argachuudhaani!
1. Yero yerootti harma lamaanuu qaqqabachuun waanti jajjabaataan ykn waanti biqile (dhiita’e) keessa isaa jiraachuuf dhiisuu isaa of ilaaluu! “Breast self examination!”
2. Sochii qaamaa ykn Ispoortii hojjechuu!
3. Nyaata keenya keessatti wantoota faatii ykn “cholesterol” qaban hir’isuu!
4. Dhugaatii alkoolii dhuguu dhiisuu!
5. Tamboo xuuxuu irraa of eeguu ykn dhiisuu!
6. Furdina qaamaa hir’isuu!
7. Daa’ima godhatan sirriitti harma hoosisuu!
8. Maatii ofii keessaa haati yookiis maatiin firoota dhihoo haadhaa fi abbaa keessaa namni kanaan dura dhibee kana qabu yoo jiraate, hordoffiidhaan raajii ykn ‘mammography’ kan jedhamu ka’uun ilaalamuu!!
9. Qoricha hoormoonii ‘estrogen’ bakka buusuuf fudhatamu fudhachuu dhiisuu! (Baay’inaan ‘menopause’ ykn sirni marsaa laguu erga dhaabatee booda, hoormooniin kun (estrogen) qaama keessaa waan hir’atuuf, baay’inaan biyya guddatanitti, waanti isa bakka buusu qorichi nii fudhatama!)
Lafee cabuu mannaa
Dubbii alaa manaa
Lubbuun nama ba’u!
Hojii dhiisanii taa’uu,
Rafanii dhibaa’uu …………. Nu oolchi!!
Boolla afaan banee
Nu liqimsuuf malu,
Gaaffii deebii hin qabne
Gumbiidhaan ol galuu,
Arraba saalfii hin beekneen
Dhugaa sobaan faaluu,
Abjuu hiika hin qabneen
Miillaa milkii hin qabneen
Kareefamaa ooluu ………….. Nu oolchi!!
Banaa gurra keenyaa
Deemsa karaa keenyaa
Adaraa nu oolchi!
Oolmaa keenya tolchi!
Nagaadhaan nu galchi!!
← ABJUUF BOOSSAA?- Abonketi Fayissa’TIIN
SHAANFOO – WALALOO-Abdii Guuttataa Dilgaasaatin →